douglas mombeshora on News24
ARTICLES RELATING TO DOUGLAS MOMBESHORA
More than 150 farm-workers and their families have been rendered homeless following last week’s forceful eviction of a white commercial farmer, Robert Smart, from his property by armed police outside Rusape town.
Zimbabwean police have clashed with workers at a farm that was seized by police this week to pave way for a top cleric, Trevor Manhanga, who has links to President Robert Mugabe's ruling Znu-PF party.
Zimbabwe’s government has reportedly evicted at least 170 A2 farmers from a Triangle Ranch in the Masvingo province, just eight months after granting them farmland.
The Zimbabwean government's reported plan to hand back land to some white farmers is an admission that the controversial land reform programme was "a humiliating disaster", the opposition MDC says.
The Zimbabwean government is set to give the remaining white farmers at least 90 days to vacate their farms, as the southern African country intensifies its land grabs, according to a report.
Heavily armed Zimbabwean riot police this week besieged the property of a white commercial farmer, Robert Smart outside Rusape town and forcefully evicted him from his farm.
The Zimbabwean government has started compensating white farmers who were evicted from their land under the country's controversial land reform programme over a decade ago, a report says.
Zimbabwe’s lands and resettlement minister Douglas Mombeshore had moved to evict at least 163 white commercial farmers as government intensifies its war against white farmers.